Bonus Battle - Myanmar Sports
🎁 BONUS BATTLE 🎁
💰 € 3,000 ( ယူရို ၃,၀၀၀ ) အထိ ရရှိနိုင်မယ့် Bonus Battle ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဥ် 💰
Bonus Battle ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး € 3,000 ( ယူရို ၃,၀၀၀ ) ဆုကြေးကြီးထဲက တစ်ခုကို အခုချက်ချင်းပဲ ကံစမ်းရယူလိုက်ပါ။
👇 1xBet အကောင့်အသစ် ဖွင့်သူများအနေနဲ့ 👇
Promo Code ( ပရိုမိုကုဒ် ) MMSPORT100 ကို အသုံးပြုတာနဲ့ 100% ဘောနပ်စ် ရရှိမှာပါ။
👉 အကောင့်ဖွင့်နည်း 👈
🕡 ပရိုမိုးရှင်းကာလ 🕡 ( 15. 06. 2022 – 21. 06. 2022 )
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၃၁ မိနစ် ( 15 June 2022 00:01 GMT ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့၊ မနက် ၆ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 21 June 2022 23:59 GMT ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဝမ်းနည်းပါတယ်။ ဒီပရိုမိုးရှင်းကာလက ကုန်ဆုံးသွားပါပြီ။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ နောက်ထပ်ပရိုမိုးရှင်းအသစ်တွေမှာ ပါဝင်ကစားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။
🏆 အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမည့် Bonus Battle ဆုကြေးများ 🏆
ဆုကြေးများ ( Bonus Battle Prizes ) ကို အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အလိုက် ချီးမြှင့်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ပထမဆု – € 1,000 ( ယူရို ၁,၀၀၀ )
ဒုတိယဆု – € 750 ( ယူရို ၇၅၀ )
တတိယဆု – € 600 ( ယူရို ၆၀၀ )
စတုတ္ထဆု – € 400 ( ယူရို ၄၀၀ )
ပဥ္စမဆု – € 250 ( ယူရို ၂၅၀ )
How to win: ဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲ?
Qualifying 1xBet “ Bonus Battle ” games: အကျုံးဝင်တဲ့ ဂိမ်းတွေကတော့ –
Cleopatra’s Gems Rockways
Meet Dragon’s Nest
Riot 2: Blow and Burn
The Evil Bet – အစရှိတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ဆော့လို့ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဂိမ်းတွင်းတူးလ် သတ်မှတ်ချက် – သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေမှာ ကစားပြီး € 1 ( ၁ ယူရို ) နိုင်တိုင်း ၁၀၀ ပွိုင့် ( 100 Points ) ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
⛔️ ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ⛔️
၁။ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ ( register in the 1xBet tournament ) စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ပရိုမိုးရှင်း စာမျက်နှာကိုသွားပြီး “ Take part ” ခလုတ်ကို နှိပ်ရပါမည်။
၂။ ဒီမှာ ပါဝင်ဖို့အတွက် 1xBet ဝဘ်ဆိုဒ်မှာ မှတ်ပုံတင်ပါ ( အကောင့် ဖွင့်ပါ ) ( 1xbet registration ) သို့မဟုတ် လော့ဂ်အင် ( Log in ) ဝင်ပါ။
၃။ ပြိုင်ပွဲ ပြီးဆုံးပြီး ရလဒ်တွေ ထွက်ပြီးချိန်မှ နောက်ထပ် ၇၂ နာရီ ( ရုံးဆင်းချိန် ၃ ရက် ) နောက်ပိုင်း ဆုကြေးများကို အနိုင်ရ ကစားသမားများ၏ မိန်းအကောင့်ထဲ
ကို ထည့်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေသားဆုများသည် နောက်ထပ် လောင်းကြေးလိုအပ်ချက်များ ( 1xbet bonus wagering requirements ) မရှိပါ။
ဒီ Bonus Battle ပရိုမိုးရှင်းမှာ ရရှိနိုင်တဲ့ အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( 1x bet bonus battle ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
– အမည်အပြည့်အစုံ၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ် (အသက်သွင်းထားရမည်) (Activate ဖြစ်ရမည်။)၊ အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် နေထိုင်ရာ ဒေသ၊ နိုင်ငံ။
ဤအချက်အလက်များကို တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုလို့ ရနိုင်မည် ဖြစ်ပါ၍ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်သွင်းပေးပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။
( ကိုယ်ရေး အချက်အလက် ဖြည့်နည်း )
၅။ ဖော်ပြပါ ပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့ ဆုပေးပွဲအဆင့်မှာ အနိုင်ရ ကစားသမားနှစ်ဦး ရပ်တည်နေပါက အမြင့်ဆုံးပွိုင့်ကို ပထမဦးဆုံး အနိုင်ရခဲ့သူကိုသာ နောက်ဆုံးဆုရှင်အဖြစ် သတ်မှတ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ ငွေကြေးအစစ်အမှန်ဖြင့်လောင်းသော အလောင်းအစားများကိုသာ ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( 1x Bet bonus battle Offer ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၈။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( Offer bonus battle 1x bet ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
( အကောင့်တစ်ကောင့်လျှင် တစ်ကြိမ်၊ မိသားစုတစ်စုလျှင် တစ်ကြိမ်၊ IP လိပ်စာတစ်ခုလျှင် တစ်ကြိမ်၊နှင့် PC တစ်ခုလျှင် တစ်ကြိမ် ) သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကောင့်များစွာကို မှတ်ပုံတင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိပါက ထို့ကဲ့သို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်အကောင့်များအားလုံးတွင် ထည့်သွင်းထားသော ( bonus
1xbet ) ဘောနပ်စ်များကို ပယ်ဖျက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
( ဆိုလိုသည်မှာ – တူညီသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဖြင့် အကောင့် ၂ ခု သို့မဟုတ် ၂ ခုထက်ပိုသော အကောင့်များဖွင့်၍ မရပါ။ )
၉။ တကယ်လို့ ကတ်စတန်မာ တစ်ဦးက ဤပရိုမိုးရှင်း၏ ရှုထောင့်တစ်ခုခုကို အလွဲသုံးစားပြုရန် သို့မဟုတ်၊ ကြိုးကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု သို့မဟုတ် ကာစီနို ( 1xBetcasino ) စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းကတ်စတန်မာ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet casino games promotion )တွင် ပါဝင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၀။ 1xBet သည် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နှင့်မဆို ကတ်စတန်မာများ၏ ငွေသွင်းငွေထုတ်မှတ်တမ်းများနှင့် (Log in) လော့ဂ်အင် မှတ်တမ်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့သို့ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးနောက် ကတ်စတန်မာတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသော ကတ်စတန်မာများက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြင့် ကစားသည့် နည်းလမ်း မမှန်မကန်လုပ်သည်ဟု 1xBet မှ စုံစမ်းတွေ့ရှိပါက 1xBet သည် ထိုကဲ့သို့သော ကတ်စတန်မာများ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet June 2022 promotion ) အတွက် ရပိုင်ခွင့်များကို ရုတ်သိမ်းပြီး ဘောနပ်စ် ( bonus casino 1xbet ) များကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၁။ ကတ်စတန်မာများသည် ၎င်းတို့၏ အထောက်အထား (KYC) ကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါက အကောင့်အိုင်ဒီ စာရွက်စာတမ်းများ ပေးဆောင်ရပါမည်။ တောင်းဆိုလာစဥ် အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ပါက ဘောနပ်စ်နှင့် နိုင်ပွဲများ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ 1x bet သည် ကတ်စတန်မာတို့၏ အကောင့်အိုင်ဒီ ( account ID ) ကိုင်ဆောင်ထားသော ဓာတ်ပုံအထောက်အထားများ ( ကတ်စတန်မာ၏မျက်နှာကို ဓာတ်ပုံတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်ရပါမည်။ ) သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် သက်သေခံခြင်းအား လိုက်နာခံယူရန် အချိန်မရွေး တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၂။ ပြိုင်ပွဲ၏ စည်းမျဉ်းများ ( rules of Promotion ) ကို ပြောင်းလဲရန်၊ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၃။ အကယ်၍ 1xBet သည် လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် ငွေကြေး ခဝါချမှု ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက ကုမ္ပဏီသည် ကတ်စတန်မာ၏ အကောင့်ကို ပိတ်ပြီး အကောင့်ထဲရှိ လက်ကျန်‌ငွေကို ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၄။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို ဤကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် နောက်ဆုံးအပြီးသတ်အဖြစ် မှတ်ယူရပါမည်။
၁၅။ အထက်ပါအချက်များသည် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ( best betting site ) လောင်းကစား ဝန်ဆောင်မှု၏ ယေဘူယျ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် အကျုံးဝင်ပါ
🎀 ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ ထူးခြားချက် 🎀
အရင်ပုံမှန်ရနေကျ ဘောနပ်စ်တွေတုန်းကလို မဟုတ်ပဲ ဆုကြေးတွေကို ထုတ်ယူဖို့ ဘယ်လောင်းကစားမှ ကစားပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ ချက်ချင်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ပရိုမိုးရှင်းပြိုင်ပွဲလေး ( Mascot Tournament 1xBet ) က စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာမို့လို့ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး ဆုကြေးတွေကို ရယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ခင်ဗျ။
တကယ်လို့ နားမလည်တာ၊ သိချင်တာများရှိရင် 1xbet Application ရဲ့ Customer Support – Chat Box မှတဆင့်လည်း အသေးစိတ် သွားရောက်မေးမြန်းခြင်းဖြင့် အကြောင်းအရာများကို အချိန်တိုအတွင်း သိရှိနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ပထမဆုံးသွင်းငွေရဲ့ ၁၀၀% ဘောနပ်စ်ကို အခုချက်ချင်းပဲရယူလိုက်ပါ။
1xBet ကို အခုပဲသွားလိုက်ပါ။
🎁 1xbet ရဲ့ ကတ်စတန်မာများ အားလုံးပဲ ကံကောင်းကြပါစေ ခင်ဗျ။ 🎁
🔞 မှတ်ချက်။ အသက် (၁၈) နှစ် ပြည့်ပြီးသူများသာ ကစားခွင့် ရနိုင်ပါသည်။ 🔞
စိတ်ဝင်စားစရာ ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဥ်တွေကို နေ့စဥ်မလွတ်တမ်း သိရှိနိုင်အောင် ညာဘက်အောက်က
အသိပေးခေါင်းလောင်းလေးကို နှိပ်ပြီး Subscribe လုပ်သွားပေးကြပါဦး ခင်ဗျ။